Arrimihii argagaxa lahaa ee la ogaaday intii ay socotay dacwaddii Guzmán - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaArrimihii argagaxa lahaa ee la ogaaday intii ay socotay dacwaddii Guzmán
Joaquín “El Chapo” Guzmán oo ka mid ah dambiileyaasha dhinaca daroogada ee ugu waaweyn adduunka ayaa lagu riday xukun xabsi daa’in ah, waxaana lagu helay dhammaan 10 dacwadood oo lagu soo oogay.
Maxkamad uu fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa Arbacadii ku dhawaaqday xukunka Guzmán, oo ay dacwadiisa socotay in muddo ah.
Ninkan oo horay u ahaa hoggaamiyaha kooxda arxanka daran ee Sinaloa, taasoo ka howlgaleysay dalka Mexico ayaa bishii Febraayo lagu helay dambiyo ay ka mid yihiin inuu dhoofin jiray daroogada loo yaqaanno cocaine iyo heroin, hubka sharci darrada ah iyo sidoo kale isdabamarinta lacagaha.
Garsooraha u dhashay dalka Mareykanka ee lagu magacaabo Brian Cogan ayaa xukunka xabsi daa’inka ah usii raaciyay xarig 30 sano oo dheeraad ah, isagoo ku amray El Chapo inuu soo celiyo lacag dhan $12.7 billion, taasoo lagu qiimeeyay daroogooyinkii kala duwanaa ee uu ninkan Mareykanka galiyay sanadihii 1980-meeyadii.
Dambiilahan 62 jirka ah ayey dacwad oogeyaashu ku qeexeen “Qof xaasid ah oo dhiigga bani’aadanka u ooman”.
Intii ay dacwaddiisa heerka sare ah socotay ayaa lagu hayay xasbi amnigiisa si weyn loo sugayay, maadaama labo jeer oo hore ayey u suurtagashay inuu ka baxsado xabsiga dhexe ee ugu weyn dalka Mexico.
Bishii Juun ayuu garsoore Brian Cogan ku gacan seyray codsi ay qareennadiisa soo gudbiyeen, iyagoo doonayay in isbuuciiba 2 saacadood loo oggolaado in dibadda looga soo bixiyo xabsiga.
Xaakinka ayaa sheegay in eedeymaha ninkan loo heysto aysan ahayn kuwo caadi ah, balse ay khuseeyaan waxyaabo bani’aadanimada ka baxsan.
Guzman ayaa kaliya loo oggolaa in isbuuciiba 1 saac lagu xiro xabsi kale oo dusha ka bannaan.
Muddadii saddexda bilood ahayd ee la dhageysanayay dacwadda ka dhanka ah ninkan ayaa la wareystay 50 markhaati oo shaaca ka qaaday arrimo naxdin leh oo la xiriira dambiyada uu geystay.
Kuwani waa qaar ka mid ah waxyaabaha laga argagaxo ee la ogaaday intii la dhageysanayay markhaatiyada:-
1. Qol qarsoodi ah oo dadka lagu dilo
Nin dadka dila oo uu ku kalsoonaa El Chapo ayaa adeegsan jiray “qol dadka lagu dilay”, kaasoo ku yaallay xero uu ku lahaa xadka u dhaxeeya Mareykanka iyo Mexico.
Qolkaas waxaa loo sameeyay bullaacad hoos marta oo loogu talagalay in dhiigga lagu dhaqo marka dadka lagu dilo halkaas.
Edgar Galvan ayaa bishii Janaayo maxkamadda horteeda ka sheegay in Antonio “Jaguar” Marrufo uu qolkaas ku xiray qalab uusan codka ka gudbi karin, si aysan cidna bannaanka uga maqlin waxa gudihiisa ka socday.
“Gurigaas, cid kasoo bixi jirtay ma jirin”, ayuu yiri Galvan.
Galvan ayaa sheegay in shaqada uu isagu qaban jiray ay ahayd inuu kooxdan hubka si qarsoodi ah ugu keeno, si ay ula dagaallamaan cadawgooda.
Isaga qudhiisa iyo ninka qolka wax ku dili jirayba waxay hadda ku jiraan xabsi ay ku muteysteen kala gudbinta hubka sharci darrada ah.
2. Gabdho uu u kufsan inay “si uu nolol uga helo”
Alex Cifuentes oo u dhashay dalka Colombia, isla markaana sheegay inuu gacanyare u ahaa El Chapo ayaa sheegay inay jireen gabdho yar yar oo si joogto ah loogu geyn jiray ninkaas, kuwaasoo intuu daroogo siiyo uu kufsan jiray.
Mr Cifuentes ayaa sheegay in haweeney lagu magacaabo Comadre Maria ay usoo gacan galin jirtay gabdho ilaa 13 jir ah, sida uu qoray wargeyska New York Times.
Haweeneydaas ayaa El Chapo iyo kooxdiisa usoo diri jirtay sawirrada gabdhaha, si ay uga xushaan kuwa ay doonayaan, iyadoo marka ay usoo direysana ka qaadan jirtay lacag dhan 5,000 oo doolar.
Warqadaha lagu muuhiyay eedeyntan ayaa lagu xusay in El Chapo uu gabdhaha yar yar ku tilmaami jiray inay “nafaqo u yihiin” wuxuuna sheegi jiray in haddii uu kufsado uu “nolol” ka helayo”.
Hase yeeshee qareenka u doodayay Mr Guzmán ayaa beeniyay dhammaan eedeymahan.
3. $100m oo uu laaluush ahaan u siiyay madaxweyne
Eedeynta ugu weyneyd ee la shheegay intii markhaatiyaasha la dhageysanayay ayaa ahayd mid dad badan ka yaabisay.
Mr Cifuentes ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Mexico Enrique Peña Nieto, oo waddankaas maamulayay intii u dhaxeysay 2012-kii ilaa 2018-kii uu El Chapo ka aqbalay lacag $100 malyan oo doolar ah.
Ninka eedeyntan soo gudbiyay ayaa sheegay Mr Peña Nieto uu lasoo xiriiray El Chapo, kaddib markii uu xilka qabtay sannadkii 2012-kii, uuna weydiistay inuu siiyo laaluush dhan $250 malyan oo doolar, si loo joojiyo howlgalka lagu ugaarsanayay isaga.
Bale El Chapo ayaa taas baddalkeeda ku yaboohay inuu bixiyo $100 malyan oo doolar, lacagtaas oo uu madaxweynaha cusub aqbalay.
Mr Peña Nieto wali wax jawaab ah kama uusan bixinin eedeymahan.
4. Cadowga nolosha lagu aasay
Markhaati kale oo lagu magacaabo Isaias Valdez Rios ayaa sheegay inuu indhihiisa ku arkay “El Chapo” oo si arxan darro ah u garaacaya saddex nin, ka hor inta uusan tooganin.
Dhacdo kalena, Mr Valdez Rios wuxuu sheegay in la dilay labo qof oo asal ahaan kasoo jeeday Sinaloa kuna biiray kooxda ninka ay cadowga isku ahaayeen Guzmán ee la yiraahdo Los Zetas.
Dadkaas oo lagu wareejiyay kooxda dilalka qaabilsan ayaa dambi looga dhigayay inay khiyaano sameeyeen.
Nin saddexaad oo uu Guzmán ku eedeeyay inuu khiyaameeyay ayuu xabad ku dhuftay wuxuuna aasay isaga oo wali nool, sida uu sheegay Mr Valdez Rios.
5. Ka baxsashadii xabsiga
Sirta ku saabsan sidii cajiibka ahayd ee uu dambiilahan uga baxsaday xabsiga dhexe ee Mexico sanadkii 2015-kii waxaa shaaca ka qaaday nin horay ula shaqeyn jiray isaga.
Damaso Lopez oo maxkamadda horteeda markhaati ka noqday ayaa sheegay in “El Chapo” xaaskiisa iyo wiilashiisa ay ka qeyb qaateen qorshihii uu ku jabsaday xabsiga Altiplano.
Wuxuu sheegay inuu jiray shir qarsoodi ah oo dhacay 2014-kii, kaasoo Emma Coronel ay ku faahfaahisay qorshihii la damacsanaa inuu ninkeeda ku baxsado.
“Waa in dhuun laga qodo dhulka hoostiisa, idinkuna waa inaad howsha billowdaan”, ayey tidhi Ms Coronel.
Wiilal uu dhalay dambiilahan ayaa markii dambe dhul ka iibsaday meel u dhow xabsiga, islamarkiina waxaa la billaabay qodista dhuunta dhulka hoostiisa mareysay.
Qalab wax jiheeya ayaa si qarsoodi ah lagu galiyay gudaha xabsiga, si looga raad raaco goobta gaarka ah ee uu ku xirnaa “El Chapo”.
Dhuunta la qoday oo masaafaheedu dhan yahay 1.6 mitir ayaa qaadatay muddo dhowr bilood ah.
“El Chapo” ayaa ka cawday dhawaaqa qodista dhuunta dhulka hoostiisa la marinayay, isagoo sheegay inuu shanqarta ka maqli jiray xabsiga uu ku jiray.
Ninka markhaatiga ah ayaa intaas ku daray in dhulka xabsiga hoostiisa ah uu aad u adkaa marka la qodayay.
Iyadoo caqabadahaasoo dhan ay jireen ayuu “El Chapo” xabsigaas ka baxsaday bishii Luulyo ee sanadkii 2015-kii.
Dhuuntii dhulka hoostiisa laga qoday ayuu ku dhex maray qalab mooto ahaan loo sameeyay oo loogu talo galay inuu ku cararo.
Donald Trump Oo Markii Ugu Horreysay U Damqaday Ilhaan Cumar, Kana Hadlay Aflagaadooyinkii Taageereyaashiisu U Geysteen Iyo Codsigii Ahaa In Lagu Celiyo Somaliya